Insurance maka nchekwa nke ndi oru onwe ha na ahia dijitalụ | ECommerce ozi ọma
Obi abụọ adịghị ya na mkpuchi bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma maka nchebe nke ndị ọrụ onwe ha nọ n'ime azụmahịa dijitalụ. Ebe ezigbo akụkụ nke ụlọ ọrụ ịnshọransị na-enye ndị ọrụ onwe ha ohere ịdenye iwu maka nkwarụ nwa oge, nke na-enye ha ohere debe ego gi n'oge ha enweghị ike ịrụ ọrụ ha. Enwere ọtụtụ azịza ha nwere ike inye maka mkpa ha kwa ụbọchị yana nke nwere ike ịbụ ngwa ọrụ maka nsogbu ụfọdụ ha nwere ike ịmalite.
Kslọ akụ na ụlọ ọrụ ịnshọransị agbanweela uche ha na ngalaba na-ahụ maka ọrụ onwe ha, na-enye ha ngwaahịa emere kpọmkwem maka ha na mkpa ha, yana nke na-eburu nsogbu nsogbu akụkụ a nke ọha mmadụ chere ihu. Ihu ọma na-enye mejupụtara abụọ mkpuchi ngwaahịa, na aka nke mkpuchi nke nkwarụ nwa oge, nke na-enyere ha aka ilekọta ego ha na-enweta n’oge ha enweghị ike ịrụ ọrụ ha. Mgbe ọzọ, enwere atumatu ahụike, nke nwere mkpuchi ahụike zuru oke yana nkwa nke ụlọ ọgwụ maka ebumnuche ọ bụla.
Mkpa ha sitere n'eziokwu nke mkpa nke ndị ọrụ a na-arụrụ onwe ha ọrụ nke na-enweghị ọtụtụ nsogbu mberede ndị a kpuchie na ndụ ọkachamara ha. A na-egosipụta ụdị atumatu a pụrụ iche site na ịbụ onye na-agbanwe agbanwe na nke nwere ike ịnwe ụgwọ naanị mkpuchi ịchọrọ. Ha na-enye gị ọsọ ọsọ na njikwa kwupụta. Na nhọrọ nke subscribing ọzọ nche bụrụ na ị ime ihe ọ bụla mebiri ndị ọzọ na mmepe nke gị ọrụ ọrụ. Ya mere, ọ bụ mkpuchi maka mkpa gị yana nhọrọ nke ịhọrọ mkpuchi iji daba gị, dị ka isi mmalite nke njirimara gbasara mkpuchi ndị ọzọ nwere njirimara ndị yiri ya.
1 Nchedo nke ndị ọrụ onwe ha: uru ha
2 Na-akwụghị ụgwọ nke kaadị akwụmụgwọ
3 Ego mkpuchi
4 Insurance maka ndị ọkachamara
5 Insurance maka ndị ọkachamara
Nchedo nke ndị ọrụ onwe ha: uru ha
Ndị ọrụ onwe ha nwere ike nkwekọrịta dịka nhọrọ mkpuchi maka mkpuchi ezumike ezumike ihe ndị a anyị na-ekpughe n'okpuru:
Lọ ọgwụ maka ebumnuche ọ bụla: maka mkpuchi a, onye na - ejide iwu ga - enweta ego ọzọ ma ọ bụrụ na, ma ọ bụrụ na ọrịa ma ọ bụ ihe ọghọm, a nabatara ya n'ụlọ ọgwụ maka opekempe nke awa 24.
Kwụsị ọrụ: Ọ bụrụ na onye ịnshọransị ahụ na-arụrụ onwe ya ọrụ ma na-etinye aka na Nchekwa Onwe Onye Ọha, Nkekọ, Montepío ma ọ bụ ụlọ ọrụ yiri ya dịka iwu kpebiri, a ga-akwụ ha ụgwọ ọnwa kwa ọnwa maka ịkwụsị ọrụ ha.
Na-akwụghị ụgwọ nke kaadị akwụmụgwọ
Na-akwụghị ụgwọ nke kaadị akwụmụgwọ gị bụ nke ọzọ nke uru enyere site na ngwaahịa ego a n'oge a. Maka mgbe onodu ha anaghi ekwe ha ihu ugwo onwa nke ihe ha kwuru. Site kwa afọ ma ọ bụ kwa ọnwa adịchaghị na-adịghị oke oke ebe ọ bụ na ọ dị gburugburu Euro 20 ma ọ bụ 30 kwa ọnwa. Ọnụ ego a ga-atụgharị uche na nnata nke ọnwa nke ana - ewepụta site na kaadị kredit nke ndị ji ego a zuru ụwa ọnụ nke ịkwụ ụgwọ. Ezubere ya maka ọnọdụ ndị ọkachamara a ga-akwụsị ọrụ ha ma ọ bụ bụrụ ndị na-enweghị ọrụ.
N'ụzọ dị otú a, ha nwere ike iji oge ụfọdụ na-akwụghị ụgwọ eji na plastik ndị a gbakọtara na nke nwere ike ibute ọtụtụ nsogbu mgbe ha na-akwadebe ha mmefu ego nke onwe ma ọ bụ nke ezinụlọ. Ọ bụ, n'ọnọdụ ọ bụla, nhọrọ nhọrọ nke ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ naanị ma ọ bụrụ na ha kwenyere na ọ bara uru ịnweta ọrụ a dabere na mkpa ha n'ezie na ngalaba ọkachamara ha na-arụ ọrụ. Inwe ike n'oge ọ bụla iji kwụsị nkwekọrịta nke mkpuchi a na-enweghị ụdị ntaramahụhụ ma ọ bụ mmefu ọ bụla na njikwa ya.
Insurance nke njirimara ndị a bụ nnọọ pụrụ iche amụma na-enye ụgwọ na ihe omume nke hapụ ọrụ ma ọ bụ ọkachamara iji kwụọ ụgwọ maka mbelata ego a na-enweta na Social Security yana akwụghachi ụgwọ ndị ọzọ n'ihe banyere ịga ụlọ ọgwụ maka ihe kpatara ya. N'ime ya ka ọ na-egosi mkpuchi bụ isi, dịka nke anyị na-enye n'okpuru:
Nkwụghachi ụgwọ kwa ụbọchị maka nkwarụ nwa oge n'ihi ọrịa na / ma ọ bụ ihe ọghọm.
Gụnyere uru ịmụ nwa.
Nkwụghachi ụgwọ ma ọ bụrụ na enwere ụlọ ọgwụ n'ihi ọrịa na / ma ọ bụ ihe mberede: maka ụbọchị ọ bụla ị nọ n'ụlọ ọgwụ (site na elekere 24 ruo ụbọchị 365).
Uru ụtụ Isi nke ndị na-arụrụ onwe ha ọrụ nke na-enye aka site na ịwepụ atụmatụ ego na nloghachi ụtụ isi. (Ruo karịa nke 500 EUR).
Na mkpuchi ndị ọzọ nwere ike ịhọrọ ma nke ahụ gụnyere uru ndị a n'ime amụma nkwekọrịta:
Wa ahụ aka.
Ahụhụ zuru oke na-adịgide adịgide.
Enyemaka Ahụike maka Mberede.
Insurance maka ndị ọkachamara
Nke a bụ mkpuchi na widest mkpuchi na ọrụ. Na mkpuchi a ị nwere ike itinye uche na mkpuchi niile ịchọrọ (ahụike, ego na / ma ọ bụ ọnwụ) n'otu otu nnata yana ọnụego pụrụ iche. Ọ bụ, n'ọnọdụ ọ bụla, mkpuchi mkpuchi otutu na ohere nke ijikọta mkpuchi dịka mkpa ndị ahụ ma chịkọta ha na otu nnata.
Iwu nke ụdị mkpuchi ndị a nwere ike ikpokọta:
Ahụike: Ngwaahịa Chart Medical
N'ọnọdụ ụfọdụ, iji nwee ike ịnweta ụfọdụ mmesi obi ike, ị ga-echere oge ụfọdụ ebe ị malitere ịnụ ụtọ uru nke iwu gị.
Site na klaasị mkpuchi a, enwere ike iji uru ọ bụla site n'otu ụbọchị, naanị ọrụ ndị a nwere oge amara:
Lọ ọgwụ na ịwa ahụ (gụnyere prosthetics): ọnwa 6
Anapụta: (ma e wezụga nnyefe akaghi aka): ọnwa asatọ
Ntughari: ọnwa 12
Insurance nke njirimara ndị a na-enyere gị aka ikpuchi mmefu pụrụ iche nke ịga ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ịwa ahụ na-eche (nnyefe, mmezi nke ndị ibe, ilekọta ụmụaka, enyemaka ụlọ, wdg) site na ịkwụ ụgwọ ụgwọ kwa ụbọchị ruo na nke kachasị otu afọ na ụlọ ọgwụ ọ bụla insured dị.
N’aka nke ọzọ, ọrịa ma ọ bụ ihe ọghọm nwere ike ịmanye gị ịhapụ ezumike, nke pụtara obere ego na mmefu ndị ọzọ. Na mkpuchi a, a gaghị emetụta akụ na ụba gị ma ọ bụrụ na ezumike ọrịa, ebe ọ bụ na a na-ekenye onye ọ bụla na-ekwu ma ọ bụ usoro ọgwụgwọ akụnụba (ọnụ ọgụgụ).
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Insurance maka nchedo nke ndi oru onwe ha na ahia dijital
Ọ bụ ezi echiche ịnye ụgbọ mmiri mba ofesi?